, खानका लागि कुन तेल ठीक ?
काठमाडौ, १२ भाद्र । मलाई धेरैले एउटा साझा प्रश्न सोध्ने गर्छन्– ‘कुन खानेतेल स्वास्थ्यका लागि ठीक होला ? ’ धेरै मानिस तेल, घिउ, बोसोलगायतका चिल्लो खाद्यपदार्थ र कोलेस्ट्रोलका बारे भ्रममा परेका देखिन्छन् ।
यति धेरै थरी तेलहरुमध्ये कुनचाहिँ बढी स्वास्थ्यवद्र्धक छ, गृहिणीहरुले दिनदिनै खाना पकाउन कुन तेल प्रयोग गर्ने, यी तेलहरुका फाइदा–बेफाइदा के–के हुन्, तेल–घिउजस्तो चिल्लो खाद्यपदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे पछिल्लो वैज्ञानिक अवधारणा के छ भन्नेबारे यहाँ छोटकरीमा वर्णन गरेको छु ।
फ्याटी एसिडहरु चार प्रकारका हुन्छन्– स्याचुरेटेड, मोनोअनस्याचुरेटेड, पोलिअनस्याचुरेटेड र ट्रान्स । हामीले सुन्दै आएका ओमेगा–३, ओमेगा–६ र ओमेगा–९ यिनै चार प्रकारका फ्याटी एसिडहरुमध्येका हुन् । तेलको प्रकार हेरीकन यी पौष्टिक तत्वहरु पनि कम–बेसी हुन्छन् । उदाहरणका लागि सूर्यमुखी तेलमा पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याट र ओमेगा–६ को मात्रा बढी हुन्छ भने तोरी र ओलिभ तेलमा मोनोअनस्याचुरेटेड फ्याट र ओमेगा–३ को मात्रा बढी हुन्छ । नरिवल तेल र घिउमा स्याचुरेटेड फ्याट बढी पाइन्छ । यो खबर आजको समाचारपत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
स्वास्थ्यको लागि जनैपूर्णिमामा क्वाँटी खानुका फाइदाहरु